शाओमी पोकोफोन एफवान नेपाली बजारमा, दराज डटकमबाट 'सेल डे' मा ३४ हजारमै किन्न पाईने - Technology Khabar
» शाओमी पोकोफोन एफवान नेपाली बजारमा, दराज डटकमबाट ‘सेल डे’ मा ३४ हजारमै किन्न पाईने
पोकोफोन एफ वान स्मार्टफोन
काठमाडौं । शाओमीले नेपाली बजारमा पहिलो पटक आफ्नो पोकोफोन सबब्राण्डको पोकोफोन एफवान(Pocophone F1) स्मार्टफोन भित्र्याएको छ । शाओमी भित्रकै निकै अनुभवी टोलीबाट निर्मित पोकोफोनले स्मार्टफोन प्रयोगको अनुभवलाई झन्झटमुक्त बनाउने कम्पनीले उल्लेख गरेको छ ।
बुधवार बजारमा सार्वजनिक भएको पोकोफोन एफवान, पोकोफोन ब्राण्डको पहिलो स्मार्टफोन हो । यो स्मार्टफोनले ब्राण्डको मिसनलाई राम्रोसंग बाँधेर राखेको छ । यो फोनको विशेषता भनेको यसमा प्रयोग भएको अत्याधुनिक क्वालकम स्न्यापड्रागन ८४५ प्लेटफर्म, प्रभावशाली लिक्विड कुल टेक्नोलोजी कुलिङ्ग सिस्टम र ४००० एमएएचको ब्याट्री हो ।
शाओमी नेपालका कन्ट्री जनरल म्यानेजर सौरभ कोठारीले भने, ‘पोको मतलब सानो । हाम्रो सोच भनेको सानो तरिकाले सुरुवात गर्ने तर ठूलो सपना देख्न नछोड्ने हो । पोको शाओमी भित्रको एउटा सानो अंश हो । पोकोले शून्यबाट नै स्वतन्त्र तरिकाले आफ्नो प्रोडक्टमा कसरी धेरैभन्दा धेरै विकल्पहरु र अत्यावश्यक प्रविधिको दिने कुराहरुमा ध्यान दिएको छ । त्यसैले हामीहरुले यस्तो स्मार्टफोन बनाएका छौं जसले पत्याउनै नसकिने पर्फरमेन्स दिन्छ । यसको समय सापेक्ष प्रविधिले टेक्नोलोजी उत्साही जमातलाई अवश्य पनि तान्ने छ ।’
नवीन र शक्तिशाली यो स्मार्टफोन अत्यन्त आकर्षक मूल्यमा किन्न पाइनेछ । शाओमीको विशेषता भनेकै सही मूल्यमा धेरैभन्दा धेरै आकर्षक सामान बजारमा ल्याउनु हो । कात्तिक २५ गतेदेखि नेपाली बजारमा उपलब्ध हुने यो स्मार्टफोन ३४ हजार ९९९ रुपैयाँमा किन्न सकिनेछ । यसमा ६ जीबी र्याम र ६४ जीबीको स्टोरेज राखिएको छ ।
पोकोफोन एफवान, मास्टर अफ स्पीड
पोकोफोन एफवान गेमिङ्गको लागि र ठूला किसिमका आप्लिकेशन प्रयोग गर्न रुचाउने उपयोगकर्ताहरुको लागि उपयुक्त स्मार्टफोन हो । यसमा रहेको शक्तिशाली क्वालकम स्न्यापड्रागन ८४५ एसओसी र लिक्विडकुल कुलिङ्ग प्रविधिले सिस्टम स्लो हुने र फोन तात्ने समस्याबाट प्रयोगकर्ताहरुलाई मुक्त गर्नेछ साथै लामो समयसम्म उच्च परफर्मेन्स दिनेछ । विविध आन्तरिक परिक्षणले यो फोनको सिस्टम अरु साधारण फोनको सिस्टम भन्दा ३०० प्रतिशतले प्रभावकारी भएको देखाएको छ । कारण यसले सिपियूमा आउने तातोपनलाई छिटै चिसो बनाउँछ ।
साथसाथै, पोकोफोन एफवानमा भएको ४००० एमएच ब्य्याट्रीबाट ८ घण्टासम्म लगातार गेमहरु खेल्न सकिन्छ ।
एआई डुअल क्यामरा र २० एमपीको फ्रन्ट क्यामराबाट अब असीमित रुपमा फोटो खिच्नुस्।
पोकोफोन एफवानले सुन्दर फोटो लिन्छ किनभने यसको एआई डुअल क्यामरामा १२ मेगापिक्सेलको सोनी आइएमएक्स ३६३ प्राइमरी सेन्सर छ, जसको डुअल पिक्सल अटोफोकसले लो लाइट र ब्याकलिट भएको अवस्थामा पनि राम्रो फोटो निकाल्न सक्छ ।
पोकोफोन एफवानको फ्रन्टमा २० मेगापिक्सेलको सेन्सर छ जसको सुपर पिक्सेल प्रविधिले चार पिक्सेलको जानकारी जोडेर एउटा १.८ माइक्रोमिटर पिक्सेलमा परिवर्तन गर्नसक्नेछ । जसले गर्दा फोटोहरु सफा र नोइजमुक्त हुनेछन् । पछाडिपट्टी र अगाडिपट्टीका दुवै क्यामेरामा एआइ पोर्टेट, एर्आइ ब्यूटिफाइ र एआइ सिन डिटेक्सनलगायतका एआई सुविधाहरु छन् ।
पोकोफोन एफवानमा इन्फ्रारेड इल्यूमिनेटर र इन्फ्रारेड क्यामेरापनि छ जसले एआइ फेस अनलक गर्ने सुरक्षा सुविधा दिन्छ । अँध्यारो र उज्यालो दुवै स्थितिमा यो सुविधा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
पोकोफोन एफवान ग्राफाइट ब्ल्याक र स्टिल ब्लू ब्याक कभरमा उपलब्ध छ । यो फोन दराज डटकमबाट केवल रु.३४,९९९/– मा किन्न पाइनेछ । दराजको ११:११ सेलमा यो फोनको ६ जीबी र ६४ जीबी स्टोरेज मोडल रू. ३३,९९९/– मा उपलब्ध हुनेछ । यो अफर कात्तिक २५गतेदेखि सुरु हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
एप्पलले महंगा मूल्यका आइफोन भारतमा बनाउँदै, घट्ला त आइफोनको मूल्य ?
गूगल पिक्सेल ३ र पिक्सेल ३एक्सएल स्मार्टफोन सार्वजनिक, पहिलो पटक वायरलेस चार्जिंगको सुविधा
नेपाल टेलिकमको सेवा दैलेख जिल्लामा अब अप्टिकल फाइबरबाट उपलब्ध